Sidee baan uu takhtarka aado? Macluumaad loogu talagalay qaxootiga iyo doolka. | USAHello
Ma u baahan tahay si ay u bartaan sida loo dhakhtarka ee America si ay u tagaan? Read ku saabsan helidda dhakhtar, ballan iyo hadlaya dhakhtarkaaga. Ogow waxa aad samaynayso haddii aad u baahan tahay turjubaan.
Sidee baan ku heli karaa takhtar?
bulshada intooda badan waxay leeyihiin xarumo caafimaad ama xarumaha caafimaadka ee bixiyeyaasha daryeel caafimaad oo aasaasi ah iyo adeegyada kale ee caafimaad. Waxaad codsan kartaa in aan saaxiibbadeeda iyo derisyadeeda kuwaas oo ay ku talinaynaa. Waxaad weydiin kartaa xafiiska dib u dejinta ama hagid inay kaa caawiyaan inaad hesho bixiyaha daryeelka aasaasiga ah - dhakhtarkaaga qoyska maalin kasta.
Sidoo kale waxaad ka eegi kartaa FindHello bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ee magaalada aad ku nooshahay. Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha, kuwaas oo ay bixiyaan adeegyo loogu talogalay qaxootiga iyo dadka kale ee iyo dadka aan caymiska.
Maxaa dhacaya haddii aan deg-deg ah?
Haddii aad leedahay xaalad degdeg ah oo naf-gooyada ah, waa in aad u tagto isbitaalka ee maxalliga ah waaxda gurmadka degdegga ah ama wac 911.
Waayo, arrimaha caafimaadka ee aan degdegga ahayn, laakiin aad weli si deg deg ah u baahan tahay dhakhtar, waxaad tagi kartaa daryeel degdeg ah oo soco-in rugaha. Kuwani waxay inta badan saacadaha habeenkii iyo weekend, la siiyo daryeel ballan la'aan.
Waayo, wax dhibaato kale ee daryeelka caafimaadka, cudurada caadiga ah, ama si aad u hesho a jeeg-up ama tallaal, waa in aad ballan la leedahay dhakhtarka daryeelka aasaasiga ah.
Sidee baan u ballan si uu takhtarka aado dhigi?
Waxaad u baahan doontaa inaad ballan samaysato si aad u aragto dhakhtarka. ballan Waxaad samayn kartaa adigoo wacaya xafiiska dhakhtarka. Haddii aad tahay habdhiska ku saabsan Ingiriisi, weydiiso saaxiib ama qaraabo inay kaa caawiyaan inaad si ay u sameeyaan call ama dhakhtarka kuu raaco. Waxaad kaloo weydiin kartaa xafiiska si aad u hesho turjumaan taleefanka si uu kaaga caawiyo inaad iyaga la xiriiri. Hoos ka fiiri sida loo diyaariyo call.
Ka hor inta wacaya, hesho kaarka caymiska caafimaadka
xafiiska dhakhtarka ayaa ku weydiin doonaa macluumaadka adiga kugu saabsan. Macluumaadkaaga caymiska caafimaadka (haddii aad leedahay caymis) waa on kaarka caymiska caafimaadka.
ID Member # (Tani inta badan waa string dheer tirooyinka iyo xarfaha hore ee kaarka)
Magaca qorshaha caymiska
Taariikhda diiwaan gelinta qorshaha caymiska
(Haddii aadan haysan macluumaadkan mid ay heli, waxaad wici kartaa shirkadaha caymiska si aad ugu horeysay oo ay awoodaan in ay kuu sheegaya macluumaadka telefoonka si aad u qori kartaa noqon doonaa.)
Haddii aadan weli ma leedahay caymis caafimaad, aad u ogaato sida aad u heli caymiska caafimaadka ee USA.
Marka aad wacdo
Marka qof ka jawaaba telefoonka, ha ogaadeen in aad u baahan tahay inaad hesho dhakhtar oo aad rabto in aad ballan u. Waxaad u baahan doontaa in uu sharaxo waxa uu yahay, waayo,. Haddii aad u baahan tahay si aad u hesho turjumaan, hadda waa wakhtigii fiican inaad caawinaad weydiisato.
Qofka jooga xafiiska dhakhtarka ku weydiin doonaa su'aalo adiga iyo caymiska caafimaadka ku saabsan. Waxay ku siin doonaa waqti ballan. Haddii ay taasi waa waqti fiican kuu, baad u odhan kartaa haa iyo aad ballan la qabanayaa. Haddii waqtiga ay bixiyaan ma idiin tahay Khayr, Isla markiiba u sheeg, oo waxay arki doonaan, waayo, mar kale waa idiin khayr roon.
Qor waqtiga, taariikhda, iyo cinwaanka ballanta.
Marka aad dhigay ballantaada, isku day in aad u dhawrtaan
dhakhaatiir badan waxay leeyihiin siyaasado la joojiyo adag, halkaas oo bukaan inay bixiyaan ballamaha haddii aanay iman ama haddii ay baajiso daqiiqadii ugu danbeysay. Sidoo kale, haddii bukaan seego ballamaha aad u tiro badan oo aan ugu yeeray inay kansasho, bukaanka laga yaabaa in aanay soo dhawaynayaa xafiiska in.
Ka noqoshada ballantaada
Isku day in aad soo wacdo laba maalmood ka hor haddii aad ballan ma samayn karaan. Xitaa hal maalin ka hor ama isla maalintaas waa ka wanaagsan yahay ma wacaya at dhan. Haddii aad soo wacdo ugu yaraan hal maalin ka hor ballantaada, aad ka fogaato doonaa lacag la joojiyo a.
Noqo waqtiga ballantaada
Marka aad tagto dhakhtarka, muujiyaan ilaa waqtiga ama hore ballantaada. Sida caadiga ah, waxaad yeelan doontaa in aad buuxisid foomamka qaar ka mid ah aad ka hor xafiiska. Haddii aad la wareersan tihiin ku saabsan waxa aad ku qor noocyadan, waxaad weydiisan kartaa saaxiib, qaraabo, ama soo-dhaweeyaha xafiiska si ay kuu caawiyaan.
Xusuusnow, haddii aad tahay mid aad u soo daahay ballantaada, waxaa suurto gal ah in waqtiga aad la iska siin doonaa oo aad doonaa in aan loo oggolaan in ay aragto takhtarka. Isku day in aadan noqon daahay!
Waa maxay soo ballantaada
Soo qaado kaarka caymiska iyo meel kasta oo kale oo ka mid ah lacagta in aad u baahan tahay in aad
Soo qaado liiska wax daawo ah in aad qaadato
Soo qaado liiska wax xasaasiyad loo yaqaan
Qor wixii su'aalo ah ee aad leedahay, waayo, dhakhtarka oo waxaad iyaga keentaa aad la
Warqad iyo qalin ay dhacdo in aad rabto in aad qorto qoraalo
Sidee baan u la hadasho dhakhtarka?
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin loogu talagalay sidii ay u xiriiraan marka aad tagto dhakhtarka,
Waxaad qaadataa qoraalo
Qor wixii su'aalo ah ee aad u leedahay in aad soo goortaad aragtaan bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga. Inta lagu guda jiro ballantaada, waxaad qaadan kartaa qoraal ku saabsan waxa aad baran. laga yaabaa in aad rabtid in la keeno xubin qoyska ah ama saaxiib aad la qoraal uga qaadan karaysid. Sidaas aad diiradda kartaa dareenka ku weydiinaya su'aalo aad qabto iyo dhagaysto waxa bixiyaha uu leeyahay in la yidhaahdo.
Ha ka biqin inaad warsato wax in lagu celiyo. Waxa kale oo aad dhakhtarka ka codsan kartaa in ay qoraan warbixin kooban oo aad ballan iyo macluumaad kasta oo ku saabsan daawada aad u baahan tahay in ay qaataan. ka dibna Waxaad weydiin kartaa saaxiib inuu turjumo macluumaadka si loo hubiyo in aad fahanto. Haddii aad weli su'aalo, waxaad wici kartaa kalkaalisada caafimaadka ee xafiiska dhakhtarka ka dib markii ballantaada.
Bixiyaha ka dhigi karaa cudurka, kaas oo la aqoonsiga cudurka gaar ah oo aad saamaynaya. Hubi in aad fahanto sababta ay dhigtay cudurka oo weydii in ay ku taliyaan khayraadka si ay u caawiyaan aad wax dheeraad ah looga barto cudurka. Weydii in ay kor eega macluumaad turjuman oo ku saabsan cudurka.
Si lagu ogaado a, bixiyaha ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan taariikhda caafimaadkaaga hadda oo la soo dhaafay. Waxa muhiim ah in aad ka jawaabto su'aalahan si daacad ah oo si sax ah. Macluumaadka aad bixiso caawin doonaa si toos ah daryeelka aad hesho.
Hubi inaad fahamto
Sida aad ballan dhamaado hubi in aad fahamto tallaabooyinka xiga. Bixiyaha odhan kara ma u baahan tahay inuu ku soo laabto ilaa ballantaada soo socda si joogta ah loo qorsheeyey ama waxaa laga yaabaa in ay doonayaan in ay si degdeg ah aad ku aragto ama aad gudbiyo dhakhtarka takhasuska ah si loogu daweeyo.
Xusuusnow in aad tahay link muhiim ah ee qorshaha daryeelka caafimaadka adiga kuu gaar ah. Haddii aad tahay qof wareersan oo ku saabsan waxa soo socda, weydiiso qorshaha la doonayo in la mar kale sharaxay. Waxa kale oo aad ka codsan kartaa in aad qorto qorshaha iyo taariikhda wixii balamaha mustaqbalka. Hubi in aad leedahay lambarka telefoonka ah ee bixiyaha daryeelka caafimaadkaaga si aad u la xiriiri kartaa haddii wax su'aalo ah kac marka aad guriga ku soo noqdo.
Warso gargaar marka aad u baahan tahay
Sida xafiiska caafimaadka, haddii aad u tagto dhakhtarka daryeelka isbitaalka, aad u baahan tahay si ay u fahmaan qorshaha daryeelkaaga. Hospitals shaqaale badan oo leh dad badan oo u adeegaya in doorar kala duwan, laakiin waxaa jiri doona dhakhtar ama bixiye kale oo loo xilsaaray in aad. Qofkani waa ugu dambeyntii mas'uul ka ah daryeelkaaga iyo inaad u baahan tahay in la ogaado cidda ay yihiin. sidoo kale waxaad ka waxaa lagu qori doonaa kalkaaliso. Kalkaaliyayaasha jira khayraad cajiib ah oo waa in aad si xor ah u waydiiso Gaalada wax su'aalo ah aad qabto.
waxyaalood oo muhiim ah in la xasuusto
1. Dooro bixiyaha daryeelka aasaasiga ah. Tani waxay noqon doontaa dhakhtarka ugu weyn oo qofka ugu horreeya ee aad caadi ahaan u tagaa marka hore haddii aad xanuunsato.
2. Haddii aad qabto aragto dhakhtar cusub, loo hubiyo in ay ku network caymiska si aad caymiska bixin doonto booqashada. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad si looga fogaado in la helo biil badan oo boostada in aadan ka filan.
3. Soo qaado kaarka caymiska si aad u ballan kasta oo caafimaad ama booqo farmashiyaha.
4. Haddii aad qaadato daawooyinka, had iyo jeer keenaan liis ay magacyadii reer binu dawooyinka aad qaadato.
Waxaad xaq u leedahay in ay awoodaan in ay si fudud ula xiriiraan dhakhtarkaaga. Haddii adiga ama qof qoyska ka mid ah dhib xafiiska dhakhtarka ayaa waxaa isagoo ay sabab u tahay luqadda, waxaad mar walba weydiin kartaa turjumaan. Xafiisyada dhakhtarku Most iyo isbitaalada heli karo turjumaan qof ahaan ama taleefan kuwaas oo kaa caawin kara noqon doonaa.
caawinaad turjumaad Free